अमेरिकामा चिनियाँ लगानी घट्यो | गृहपृष्ठ
Home अन्तरराष्ट्रिय अमेरिकामा चिनियाँ लगानी घट्यो
अन्तरराष्ट्रिय 138 views
अमेरिकामा चिनियाँ लगानी घट्यो
गतवर्ष अमेरिकामा भएको चिनियाँ लगानीमा तीव्र कमी आएको तथ्याङ्क छ । गतवर्ष दुई देशबीचको व्यापार तनावमा भएको वृद्घिका कारण लगानी घटेको बताइएको छ । गतवर्ष चिनियाँ कम्पनीले अमेरिकामा २९ अर्ब डलरबराबरको लगानी गरेको अमेरिका चीन सम्बन्धबारे राष्ट्रिय समिति र अनुसन्धान तथा परामर्शदाता संस्था रोडियम ग्रूपले संयुक्त रूपमा तयार गरेको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
लगानीको यो आकार सन् २०१६ को तुलनामा ३५ प्रतिशत कम हो । सन् २०१६ मा अमेरिकामा ४६ अर्ब डलरबराबर चिनियाँ लगानी भएको तथ्याङ्क छ । दुई देशमा भएको नीतिगत परिवर्तनका कारण लगानी घटेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । चीनले विदेशमा गर्ने लगानीमा अङ्कुश लगाएको छ भने राष्ट्रिय सुरक्षाका कारण देखाउँदै अमेरिकाले कुनै पनि सम्झौतालाई विचार गरेर मात्र अघि बढाउने बताएको छ ।
चीनको व्यापार नीति ‘अविवेकी’ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि एकपटक चिनियाँ व्यापार नीतिबारे आलोचना गर्दै नीतिलाई ‘अविवेकी’ बताएका छन् । ट्रम्पले सवारी साधनको आयात महशुल बढाएको विषयलाई आफ्नो ट्विटर सन्देशमार्फत पुनः आलोचना गरेका हुन् । ‘सवारी साधन आयातमा चीनको करनीति सही छैन,’ उनले भने । चीनबाट अमेरिकाले एउटा कार आयात गर्दा २१ दशमलव ५ प्रतिशत महशुल तिर्नुपर्छ, तर अमेरिकाले निर्यात गर्दा २५ प्रतिशत महशुल तिर्नुपर्छ । यो स्वतन्त्र र न्याययुक्त नभई वर्षाैंदेखि रहँदै आएको अन्यायपूर्ण व्यापार नीति भएको ट्रम्पले बताएका छन् ।
गुचीको विक्री बढ्यो
१२ बैशाख २०७५, बुधबार १४:५१
कोका–कोलाको विक्री अपेक्षा गरेभन्दा बढी
१२ बैशाख २०७५, बुधबार १४:१९
९ हजार नेपालीलाई फिर्ता पठाउँदै अमेरिका
१२ बैशाख २०७५, बुधबार १२:१२
थप दुईओटा टुर्नामेण्ट ल्याउने तयारीमा फिफा
१२ बैशाख २०७५, बुधबार ०६:५८
०.३५ प्रतिशत घट्यो नेप्से (२ बजेको अपडेट)
चुरे क्षेत्रको वनमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्दै
सरकारी कारोबार र राजस्व संकलनको काम विद्युतीय प्रणालीमा
ओमको चुक्तापूँजी ८४ प्रतिशत बढ्यो
सानिमा इक्वीटी फण्डको प्रतिएकाई खुद सम्पत्ति मूल्य रू. ९.९३
गरिबी निवारणका लागि हरित अर्थतन्त्रः अर्थमन्त्री
गरिमाको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ५३ करोड
०.२७ प्रतिशत बढ्यो नेप्से (१ बजेको अपडेट)